स्टिकर र लेबलहरू - Print Peppermint
आफ्नो लोगो र ब्रान्ड सन्देश प्याकेज, ल्यापटप, वा तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो हजुरआमा टाँस्नुहोस्। आफू अनुकूल लेबलहरू र स्टिकरहरू सँधै व्यवसाय मालिकहरू र ग्राहकहरूका लागि एकदमै रमाइलो हुन्छन्।
घर / स्टिकर र लेबलहरू
कस्टम लेबलहरू (9)
कस्टम स्टिकर (16)
स्टिकर र लेबलहरूसँग सम्बन्धित रोचक लेखहरू
डाई कट स्टिकर बनाम किस कट स्टिकर
स्टिकरहरू एक शानदार तरीका हो केहि ब्रान्ड मान्यता कमाउन र तपाईंको व्यवसायको लागि परिभाषित व्यक्तित्व विकास गर्न। चतुर नारा, कलात्मक छविहरू, र जटिल ग्राफिक्स स्टिकरको संसारमा सबै निष्पक्ष खेल हो, तर एकपटक तपाईं डिजाइनमा बस्नुभयो भने विचार गर्न बाँकी धेरै छ। ती व्यक्तिहरू जसले बुझ्दछन् कि एक असामान्य आकारको ... थप पढ्नुहोस्
उच्चतम गुणवत्ता कस्टम स्टिकरहरू कसरी प्रिन्ट गर्ने
कस्टम स्टिकरहरूले भाइरल मार्केटि from देखि व्यक्तिगत ब्रान्डि and र केवल राम्रो रमाइलोको लागि विभिन्न उद्देश्यहरूको सेवा दिन सक्छ। के हुन्छ यदि तपाईं कस्टम स्टिकरहरू अर्डर गर्नुहुन्छ जुन भर्खर सम्मको छेउमा छैन? भाग्यवस, केहि सुनिश्चित गर्न को लागी केहि सरल तरिकाहरू छन् - यी सुझावहरू पालना गर्नुहोस् र तपाईंसँग उच्च गुणवत्ताको स्टिकरहरू हुन सक्नुहुनेछ… थप पढ्नुहोस्
भोलि त्यहाँ छैन जस्तो तपाईंको ट्याटू शप प्रचार गर्न १२ सल्लाहहरू!
कुनै पनि व्यवसाय मालिकले उनीहरूको व्यवसायको सफलता सुनिश्चित गर्न कडा परिश्रम गर्नु पर्छ। यसको मतलब यो हो कि उनीहरूले आफ्ना सबै समयहरू अपरेटहरू र स्टोरको कार्यप्रणाली सुधार गर्न प्रयास गर्न मात्र खर्च गर्दैनन्, तर उनीहरूका उत्पाद र सेवाहरूको प्रबर्धन र बजारका लागि नयाँ तरिकाहरूका बारे पनि सोच्न पर्छ। यो… थप पढ्नुहोस्
FAQs - स्टिकर र लेबलहरू
हो Print Peppermint आउटडोर प्रयोगको लागि स्टिकर टिकाऊ पर्याप्त छ?
हो, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ print peppermint कार बम्परहरूमा स्टीकरहरू यी अत्यधिक मौसम अवस्था प्रतिरोधी छन्। बाहिरी अवस्थाहरूमा पर्दा स्टिकरमा कुनै क्षति हुने छैन।
के यी स्टिकरहरू हटाउन सकिन्छ?
हामी स्टिकरहरूको लागि कडा र स्थायी चिपकने प्रयोग गर्दछौं। त्यसोभए, यो सल्लाह दिइन्छ कि एकपटक लागू भए पछि तपाईले त्यसलाई हटाउनुहुन्न।
के तपाईं चुम्बन कट वा स्टिकर पाना प्रिन्टि? गर्नुहुन्छ?
हो, हामी यहाँ मूल्य निर्धारणका लागि कस्टम उद्धरण अनुरोध गर्दछौं।
म कसरी स्टिकरहरू बनाउने?
धेरै जसो चीजहरूको साथमा, बिरालाको छाला लगाउने धेरै तरिकाहरू छन्। यहाँ केहि विकल्पहरू छन् जुन तपाइँसँग तपाइँको आफ्नै स्टिकर बनाउन को लागी छ। The Avery Way तपाईं सधैं आफ्नो स्टिकर आफैं डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, केहि Avery लेबल स्टक किन्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई घरमा तपाईंको डिजिटल प्रिन्टरमा छाप्नुहोस्। Avery ले प्रि-कट लेबल पानाहरू प्रदान गर्दछ ... थप पढ्नुहोस्
म कसरी ग्लास, कार, बम्परबाट स्टिकरहरू हटाउने ... वा तिनीहरूलाई कुनै चीजबाट हटाउन सकूँ?
हाम्रा स्टिकरहरूले तपाईंको सन्देश सधैँ देखिने कुरा सुनिश्चित गर्दै लगभग सबै सतहहरूमा राम्रोसँग जोड्ने एकदमै बलियो टाँसेको प्रयोग गर्दछ। यसको नकारात्मक पक्ष यो हो कि तिनीहरू हटाउन अलि गाह्रो हुन सक्छ। जे होस्, यी परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन्छन् जहाँ तपाईंले स्टिकरहरू हटाउनु पर्छ र तिनीहरूले छोडेका अवशेषहरू, यहाँ केही लेखहरू छन् ... थप पढ्नुहोस्
बम्पर स्टिकर के हुन्?
Print Peppermint's बम्पर स्टिकर 4mil उच्च गुणवत्ताको सेतो विनाइल फिल्ममा छापिएको छ। यो एक्रिलिक चिपकनेसँग लेपित गरिएको छ, जुन लेफ्लाट लाइनरमा टुक्रा टुक्रा हुन्छ। फिल्मले विभिन्न उपचार योग्य र घोलकमा आधारित स्याही स्वीकार गर्दछ जबकि लाइनरले असाधारण उत्पादन लेफ्टलाट प्रदान गर्दछ। यसले स्टिकरहरूलाई बम्परहरूमा सहजै पछ्याउन र कुनै पनि वातावरणीय अवस्थाहरूको सामना गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईले प्रस्ताव गर्नु भएको बिभिन्न प्रकार के के हुन्?
ठीक छ... तपाईले हाम्रो अद्भुत स्टिकर उत्पादन कोटी पृष्ठ ब्राउज गरेर देख्न सक्नुहुन्छ, हामी विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि विभिन्न आकारहरूमा स्टिकरहरूको विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछौं, जसमा: डाइ कट स्टिकर सर्कल स्टिकर आयत स्टिकर स्क्वायर स्टिकर ओभल स्टिकर बम्पर स्टिकर मेटालिक पन्नी स्टिकर खाली स्टिकर वाल स्टिकरहरू हाम्रा सबै स्टिकरहरू पूर्ण रूपमा छापिएका छन् ... थप पढ्नुहोस्
के यदि म नियमित कागज स्टिकर चाहान्छु?
यद्यपि हामी तिनीहरूलाई सिफारिस गर्दैनौं किनभने तिनीहरू विनाइल स्टिकरहरू जत्तिकै टिकाउ छैनन्, हामी निश्चित रूपमा तिनीहरूलाई छाप्न सक्छौं र तिनीहरू धेरै सस्तो छन्। यदि तपाइँ आफ्नो परियोजनाको लागि मूल्य निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो अनुकूलन उद्धरण फारम भर्नुहोस्। तिनीहरू उच्च चमक इनडोर लेबल स्टकमा उपलब्ध छन्।
के तपाईको म्याग्नेट घरभित्र वा बाहिरका प्रयोगका लागि बनेका छन्?
यो भर पर्छ। कार म्याग्नेट र चुम्बकीय बम्पर स्टिकर बाहिरका लागि बनेका छन्। हाम्रो केहि साना चुम्बकहरू घरको भित्र राम्रोसँग अनुकूल छन् तपाईको ग्राहकको फ्रिजलाई समात्दै।
के तपाईं कस्टम डाइ कट आकार आकार मैग्नेट प्रस्ताव गर्नुहुन्छ?
हो, हामी गर्छौं। मूल्य निर्धारण र विकल्पहरूको लागि तल लिंकहरू जाँच गर्नुहोस्: काट्नुहोस् म्याग्नेट श्रेणी: कस्टम म्याग्नेट
म एक कटौती उत्पादन को लागी कलाकृति कसरी सेटअप गर्ने?
राम्रो भेक्टर डिजाइन प्रोग्राम खोज्नुहोस् Adobe InDesign वा Illustrator तपाईंको डाइ कट प्रोजेक्टहरूको लागि मास्क फाइल सिर्जना गर्न। यहाँ छ कि तपाईं कसरी डाइ काट्नका लागि कलाकृतिहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ: चरण 1: नयाँ डिजाइन परियोजना सुरु गर्नुहोस्। डाइ काट्नको लागि प्रिन्ट फाइल सेटअप गर्न, तपाइँको डिजाइन CMYK मा बनाइएको हुनुपर्छ ... थप पढ्नुहोस्